I-China ZIYIUI 22inch / 55cm Iidoli ezizalwe ngokutsha Ngokwenyani iSilicone Vinyl yabantwana oonodoli ijongeka njengamakhwenkwe okwenyani asele esanda kuzalwa. Geshuo
I-ZIYIUI 22inch / i-55cm iidola ezizalwe ngokutsha I-Silicone yeVinyl yoSana eyiNtsana ijongeka inguMntwana oMncinci oSwelekileyo oSwelekileyo oSandul 'ukuzalwa oZalwe ngokutsha oNcinci oMncinci oMncinci oMncinci oMncinci.
Ubungakanani boDoli: 22 intshi
Ubungakanani beDoli: 22 intshi / 55 cm Ubunzima: 3.3LB (1.5kg). Unodoli unokunxiba iimpahla zomntwana ezisandula ukuzalwa (0-3cm). I-pacifier yamagnetic inokulingana umlomo. Iidoli ezenziwe ngezandla kunye neempahla zodoli, olona suku lokuzalwa lubalaseleyo labantwana.
Izinto eziphathekayo: Umzimba we-vinyl we-vinyl othambileyo, owenziwe nge-vinyl ye-silicone engenisiweyo, ukubamba kakuhle kodwa kunzima kancinci. Nje ube nobunzima obuthile kunye nokomelela xa ucinezela kuye. Ingangena emanzini ukwenza ishawa, awukwazi ukuhlamba nabantwana bakho. Unodoli unokuhlala kwaye alale ngokulula, kodwa akanakuma kwaye athethe. I-soft silicone baby doll ayithambile njengodoli womzimba, kodwa iyomelela kwaye ayinamanzi.
Amehlo: Umgangatho ophezulu we-Acrylic, awukwazi ukukhanya. Izinwele: I-mohair eyenziwe ngesandla eyenziwe ngesandla, Ngaba unokuhlamba kwaye unxibe, ikhangeleka ngathi ziinwele zokwenene zosana.
Iphakheji ibandakanya: Unodoli * 1, Ibhotile * 1, iMagnet pacifier * 1, Isatifikethi sokuzalwa * 1, Iimpahla * 1 (Njengomfanekiso, ukuba isitokhwe siphelile, siya kuthumela iimpahla ezifanayo).
Isiqinisekiso soKhuseleko: Imigangatho ye-En71 ye-EU, ekhuselekileyo kuwe nakwiintsana zakho. Isicelo: Izipho zoMthendeleko, izipho zokuzalwa, abantwana badlala ngeethoyi, uTatomkhulu okanye uMakhulu oHamba noMdloli, Abathandi nabaqokeleli beqoqo, Isipho seKrisimesi.
Intle kwaye iphila njengodoli ozelwe ngokutsha.
Yenziwe ngomgangatho ophezulu weSoft Simulation Silicone Vinyl. Ukuchukumisa okunethezekayo: Izinto ezingafunekiyo eziyityhefu, ezicocekileyo zokusingqongileyo.
Intloko, iingalo kunye nemilenze ziSoft Simulation Silicone Vinyl, umzimba lilaphu elizaliswe ngumqhaphu. Ngaba unokubeka into efana nokuqina, ukuhlala kunye nokuxoka? Awunako ukuma.Umzimba wedoli wodaka akufuneki ungene emanzini.
Oonodoli baya kuxhotyiswa ngeempahla kunye neebhokisi zokupakisha
Iya kuba ngumhlobo wosana lwakho kunye nosapho lwakho.
Ndinqwenela ukuba uyithande le nto.
1.Uzelwe ngokutsha unodoli * 1;
Ukupakisha iibhokisi * 1
I-ZIYIUI 24 60 cm yokuzalwa ngokutsha kosana iVinilo de Sili ...
I-ZIYIUI 22 yokuzalwa ngokutsha kweNtombazana eNtsana yabantwana ...
I-ZIYIUI 24 60 CM I-Silicone ethambileyo efana ne-Lifelike Reborn B ...
I-ZIYIUI eyenziwe ngesandla ngeSoft Silicone eyi-intshi eyi-18 yokuzalwa kwakhona kweBab ...
I-ZIYIUI 22 55 i-CM izalwe ngokutsha yomntwana ngonodoli ophethe ubomi ...